Efa mihatra amin’ireo sehatra lehibe mihazona ny toekarena ny krizy ary tsy vitan’izay fa miantraika amin’ny aty vilanin’ny Malagasy efa miaina anaty fahantrana lalina sy ireo orinasa madinika tsy ara-dalàna mameno ny firenena. Mampanahy be ihany ny ho avy ara-toekarenan’i Madagasikara ka niara-nivory ny Minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana (MICA) sy ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitatanam-bola (MEF) niaraka tamin’ireo filohan’ny Groupements Professionnels. Tanjona ny hanamafisana orina ny drafitra enti-manarina ny toekarem-pirenena manoloana ny COVID-19 (Plan de Mitigation pour la sauvegarde et la relance de l’économie malgache). Noraisina sy nangonina tamin’ity fivoriana ity avokoa ny hevitr’ireo sehatra tsy miankina mahakasika ny ho fiantraika ara-toekaran’ity aretina ity amin’ny sehatra rehetra. Izany rehetra izany no havondrona anatin’ny drafitra ary hanangonana ny antontan-kevitra rehetra. Nanambara ny Minisitra Lantosoa Rakotomalala fa hiarovana ny kely ananana sy hifehezana mba tsy handrodana tanteraka ny toekarena ny drafitra Plan de Mitigation. Ity farany izay hikasika ny seha-pihariana rehetra ary tsy ho diso anjara amin’izany ny sehatra tsy ara-dalàna. Tetsy ankilany dia nanamafy ihany koa ny Minisitry ny Toekarena, Richard Randriamandrato fa tsy maintsy hanohana ny sehatra tsy miankina ny fanjakana ary manantena ny fiaraha-miasa amin’ny Vondrona Iraisam-pirenena amin’izay ho mety ho famatsiam-bola homen’izy ireo. Tsiahivina fa ny Sénégal no efa nahavita nametraka io drafi-panarenana ny toekarena io ary i Madagasikara no faharoa hantanteraka izany.